Ama-soluble Nano-THC Amanzi we-Soluble Nano-THC Nge-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
Ukwakhiwa kweziphuzo ezithuthukisiwe ze-THC kuyinselele. – Iziphuzo ezisetshenziswe yi-THC kumele zithuthukiswe ukuze zinikeze i-bioavailability ephezulu kanye ne-potency, ukuqina kwesikhathi eside nokubukeka okucacile. I-Ultrasonic nano-emulsization ye-THC kwisiphuzo isebenza ngempumelelo kakhulu futhi ngempumelelo ukuphumela kwisiphuzo esiphakeme se-THC.
Ukuze uvule izindlela ezintsha zokusebenzisa i-THC, ezinye izindlela ezifana neziphuzo ezithuthukisiwe ze-THC ziyanda. Amadivayisi we-Ultrasonic emulsifying asetshenziselwa ukukhiqiza ibanga lokudla, ilebula elihlanzekile ne-nano-emulsions yesikhathi eside. I-Ultrasonic emulsation ihambisana nabazinza bebanga lokudla (isib I-Stuph nano-emulsifier), okukusiza ukuthi ulungiselele ama-nano emulsions asezingeni eliphakeme, ahlala isikhathi eside acacile nge-bioavailability ephezulu. I-nano-emulsions ye-Ultrasonic iguqula i-THC ibe ingxube ye-soluble enamanzi, i-nano-ekhulisiwe, engangezwa ekudleni neziphuzo. Ukufakwa kwe-Ultrasonic akuphazamisi ukunambitheka kwasekuqaleni kokwakhiwa kwakho.
Ama-probe-hlobo ama-ultrasonicators akhiqiza i-nano-emulsions eyenziwe kancane, encibilikiswa i-THC yeziphuzo kanye nezindlela zokupheka ezidliwayo ezine-bioavailability ephakeme!
Unentshisekelo ekwenzeni kucace, "saw-thru" CBD nano-emulsions? Bese uchofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-sonication ye-CBD ne-nmpemions yama-hemp!
Kungani i-THC Nanoemulsions?
I-THC-nano-emulsions yi-nano-sized-in-water (O / W) emulsions, enokubukeka okucacile / okusobala nokuqina kwesikhathi eside. I-THC iyindawo enamafutha, ngaphansi kwezimo zemvelo, angeke ihlanganiswe namanzi njengoba uwoyela namanzi benqena. I-Ultrasonication ihlinzeka ngogodo lwe-mehendi, okuphazamisa amaconsi kawoyela namanzi ukuze ingabi ngosayizi. Ngenxa yobukhulu be-droplet osayizi, ama-nano-emulsions anokukhanya okusobala, okucacile futhi azinzile ngokomzimba, okusho ukuthi izigaba zika-oyela namanzi azihlukanisi. Amaconsi amancane e-oise bioactive compact, okusho i-THC, akhungethwe amaconsi amancane kakhulu amanzi. I-emulsifier / i-survivant isiza ukwenza i-nano-emulsion ihlale isikhathi eside.
I-nano-emulsions ye-Ultrasonic inikela nge-bioavailability ephakeme, ebaluleke kakhulu kumakhompiyutha we-bioactive njenge-CBD, i-THC, amavithamini, ama-polyphenols njll, ukuze igxile ngokuphelele futhi inikeze izakhiwo zayo ezizuzisa impilo. Ngaleyo ndlela, ama-nano-emulsions alungiselelwe nge-ultrasonical alungele ukwakheka emkhakheni wokudla, isiphuzo kanye nomkhakha wezimonyo. Ukukhiqiza i-nano-emulsions enamandla amakhulu we-bioavailability, i-nano-emulsation ye-ultrasonic kuyindlela elula nethembekile yokwakha iziphuzo, i-edibles, izithasiselo zokudla, nezimonyo eziqukethe i-biCava ekhona iTC.
UP400St, i-400 watts enamandla homogeniser enamandla ama-watts, yokwenza iziphuzo zokukhiqiza ze-nano-emulsified THC.
Ungayilungiselela Kanjani Ecacile, Engamanzi ye-THC Nanoemulsions nge-Sonication
Ama-emulsifiers we-Ultrasonic angamadivayisi asebenziseka kalula, anika amandla ekwakheni i-nanoemulsion yakho yamafutha we-THC. Njengoba ama-ultrasonicators asebenzisa kuphela ukugunda okwenziwe ngomshini kungxube yakho, isb. I-THC emanzini, ukwakheka okuphumayo kungamabanga okudla. I-Sonication iyahambelana cishe nanoma iyiphi i-ejenti evuselelayo (eyaziwa nangokuthi yi-stabilizer / survivant). Ukukhetha ama-ejenti wokuqinisa amabanga wokudla (isib I-Stuph nano-emulsifier) kukusiza ukuba ulungiselele ubuhle obuhle bokugeza okulebula, ibanga lokudla elithuthukisiwe lokudla okuqukethe i-THC ngendlela efinyeleleka kakhulu.
Lapho ulungiselela i-nano-emulsion equkethe uwoyela we-THC, ingxenye kawoyela ka-THC ingafakwa ku-oyili ophethe, isb., Uwoyela we-hemp yembewu noma uwoyela we-MCT. Ngemuva kwalokho, isigaba samafutha sikhishwa singene kwisigaba samanzi (esinamanzi) sisebenzisa i-ultrasonicator enjenge-UP400St. I-Sonication inikezela inqubo esheshayo nephumelelayo ye-nano-emulsation. Ngemuva kwemizuzu embalwa, i-nanoemulsion ebonakalayo, ehlala isikhathi eside emanzini isilungile.
Nge-ultrasonication, ukukhiqizwa kwama-nanoemulsions kuba lula kakhulu!
Izinzuzo ze-Ultrasonic Nano-Emulsification
Sula ama-Nanoemulsions ane-Bioavailability ephezulu
I-High-Performance Ultrasonicators ye-THC-NanoEmulsions
Amasistimu we-Hielscher Ultrasonics 'ayimishini ethembekile esetshenziselwa ukwakhiwa kwemithi nokwengezela ukwakha amafomu aphakeme wokunezela, asuka kwi-nano-emulsions kuya kuma-liposomes, abathwali be-lipid be-nanostructured, i-nanoparticles ye-lipost, nama-inclusions complexes alayishwe amavithamini, ama-antioxidants , ama-flavonoids, ama-peptides, ama-polyphenols nezinye izinto ezixubile futhi anikezela nge-bioavailability ephezulu kakhulu, ukuzinza okukhulu nokusebenza kahle. Ukuze i-nano-emulsization ye-THC ibe iziphuzo, iziphuzo, izilokazana nezithasiselo, iHielscher ikunikeza ama-ultrasonicators anamandla nathembekile ngosayizi wezidingo zakho zokukhiqiza. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ayo, ama-Hielscher anikeza ama-ultrasonicators avela ku-compact hand-hand lab homogenizer ehlanganisiwe kanye ne-bench-top ultrasonicators to the yakazara ultrasonicators system for ukwenziwa kwama-high-volumes of nootropics and smart drug formuction. Izinqubo zokuqamba ze-Ultrasonic zingaqhutshwa njenge-batch noma njengenqubo eqhubekayo emugqeni kusetshenziswa i-ultrasonic flow-ngokusebenzisa reactionor. Uhla olubanzi lwe-sonotrodes (i-phenes) nemikhumbi ye-reactor iyatholakala ukuqinisekisa ukusethwa okulungile komkhiqizo wakho we-liposome. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
I-CBD vs THC
Uhlobo lwesitshalo Cannabis lungahlukaniswa lube izitshalo ze-hemp nezensangu.
ICannabidiol (CBD) itholakala ezitshalweni ze-hemp nezensangu, kanti i-tetrahydrocannabinol (THC) eyinkimbinkimbi itholakala kuphela ezitshalweni zensangu. I-Tetrahydrocannabinol (THC) ne-cannabidiol (CBD) zingama-cannabinoids amabili abaluleke kakhulu okungenani ama-cannabinoids ayi-113 akhonjwe ku-cannabis. I-THC yisifunda esiyisisekelo se-cannabis, samakhemikhali esaziwa ngokuthi (-) - i-trans--9-tetrahydrocannabinol. Ngokuchazwa ngakunye, izitshalo ze-hemp yizitshalo ze-cannabis eziqukethe amaphesenti angaphansi kwama-0.3, ngenkathi izitshalo zensangu ziyizitshalo ze-cannabis eziqukethe ukugxila okuphezulu kwe-THC. IHemp nayo ikhule njengesitshalo ukukhiqiza ifayibha yezimboni. I-CBD, isakhi esiyinhloko se-bioactive in hemp, yinto engasebenzi engqondweni, okusho ukuthi i-CBD ayikwenzi ube “phezulu”. I-CBD itholakala kwezentengiso ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengama-tincture, ama-gels, ama-gummies, uwoyela, amaphilisi, amaphilisi, okukhishwa okugcwele okubanzi, ama-topicals (okhilimu, ama-lotion, ama-balms, uwoyela nokugcoba) njll.
I-THC iyinto ephambili ye-psychoactive bioactive into yensangu ebhekene nomuzwa “ophakeme” we-euphoria. I-THC ingangenwa ngokubhema u- "ukhula" ngokuhlanganyela noma ngokudambisa i-edigles ecebiswe i-THC, isb brownies. Kuyatholakala futhi kuma-oyile, ama-tincture, amaphilisi, nezinye izindlela zokuphatha.
Zombili izinhlanganisela ze-cannabis, i-CBD ne-THC zibopha ohlelweni lomuntu lwe-endocannabinoid, kepha ikhemikhali ngayinye inemiphumela ehluke kakhulu (isib. Non-psychoactive vs psychoactive).
Bobabili, i-CBD ne-THC baziwa njengezokwelapha, ezisetshenziswa njengezidakamizwa noma isengezo sokwelapha ukwelapha noma ukudambisa izifo eziningana kanye nezimo zokwelashwa. I-CBD yaziwa ngemiphumela yayo yokulwa nokuvuvukala nokuphumula. Yingakho kusetshenziselwa ukwelashwa okungeziwe ukusiza ngezimo ezahlukahlukene njengokuqunjelwa, ukuvuvukala, izinhlungu, ukugula kwengqondo noma ukuphazamiseka kwengqondo (isb. I-OCD), ukuvuvukala kwamathumbu (IBS), isicanucanu, ukuqaqamba kwekhanda ne-migraines, ukudangala, nokukhathazeka.
I-THC ilungiselelwe ukudambisa izimo zezokwelapha ezinjengobuhlungu, imisipha yemisipha, iglaucoma, ukuqwasha, isifiso sokudla esiphansi, isicanucanu, nokukhathazeka.